Biyo-qaybiyeyaasha → HoReCa • Hoteellada • Makhaayadaha • Cunto-cunidda Warsaw
Ma u baahan tahay biyo-bixiyeyaal hoteel, maqaayad? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Tayo wanaagsan biyaha wuxuu muhiim u yahay nolosha waana inuu had iyo jeer diyaar yahay, guriga iyo shaqada labadaba.
Sidoo kale meelaha sida makhaayadaha, kafateeriyada, baararka i hoteelo waxaa muhiim ah in martida had iyo jeer ay helaan biyo xaddidan oo biyo macaan iyo caafimaad leh.
Biyaha la siiyaa waa inay la kulmaan himilooyinka macaamiisha, sidaa darteedna aad iyo aad ayaa marar badan warshadaha HoReCa Gudaha Poland, waxay isticmaashaa xalal caalami ah, oo ku qalabeeya goobaheeda biyo nadiif ah oo nadiif ah oo caafimaad qaba, ilo biyo iyo cabitaanka dadweynaha.
Adeegsiga tignoolajiyada wax soo saarka ee hal abuurka leh waxay u oggolaaneysaa abuurista alaabada biyo-tayo sare leh oo la kulma himilooyinka xitaa macaamiisha aadka u baahan.
Bixiyeyaasha la soo jeediyey waxay awood u siisaa isticmaalka maalinlaha ah ee tayada biyaha wanaagsan ee hudheellada, hoyga martida, baararka iyo makhaayadaha, i.e. meel kasta oo ay lagama maarmaan tahay in laga taxadariyo amniga iyo caafimaadka martida soo booqata goobahaas.
Bixiyeyaasha biyaha ee hudheelka, maqaayadda ama makhaayadda waa in lagu gartaa hufnaanta aadka u sarreeya ee qaybinta biyaha iyo tikniyoolajiyadda qaboojinta ee loo isticmaalo.
Biyo cabitaanka aaladda qaybinta biyaha loogu talagalay qaybta HoReCa waa in loo dhisaa hab lagu hubinayo nadaafad dhammaystiran ee isticmaalka.
Bixiyeyaasha noocan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa nidaamka miiraha biyaha lagu shubo ama dhululubo CO2 ah.
Bixiyeyaasha biyaha ee makhaayadaha ama hudheelada waxay hubiyaan tayada sare ee biyaha la cabo ee martida ay adeegsadaan.
Ilaha casriga ah iyo biyo-cabbiyeyaasha biyaha waa kuwa raqiis ah oo la adeegsado oo aad u hufan, waana kuwo caan ku ah suuqa, hubinta sharafta makhaayadda, kafateeriyada ama hoteelka, iyo heerka ugu sarreeya ee adeegga martida. Faa'iido dheeraad ah waa naqshada casriga ah ee aaladda, taas oo ka dhigaysa cabitaannada qurxinta meel kasta oo bannaan.
Biyo-cabista Bixiyuhu wuxuu dammaanad ka qaadayaa helitaanka biyo tayo sare leh qof kasta, waqti kasta.
Heerka hoteelka, makhaayadda ama baararka waxaa saameyn ku leh waxyaabo ay ka mid yihiin tayada biyaha la cabo ee halkaas lagu bixiyo. Haddii si sax ah loo diyaariyo oo loo adeego, tusaale ahaan carafe leh liin iyo reexaanta, sidaa daraadeed waxay dhadhamisaa mid aad u fiican oo u muuqda mid soo jiidasho leh waqti isku mid ah, xaqiiqdii waxay hagaajin doontaa muuqaalka goobta.
Dhadhan macaan oo cusub, kana xor ah dawooyinka suufka, koloriin iyo microbes, biyuhu waxay ka imaan karaan biyo-waraabiyayaal casri ah. Biyaha la sifeeyay, ee la daahiriyey waxaa lagu siin karaa dhalada ama maraafyada, ama waxaad ka samayn kartaa liin dhanaan leh.
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa guryahooda u isticmaala aalado nadiifinta biyaha ee nadiifka ah sidoo kale waxay filayaan in marka ay isticmaalayaan adeegyada hoteel ama makhaayad ay iyaguna isticmaali doonaan biyo caafimaad iyo nadiif ah.
Biyo ka adeegida warshadeeyahu waxay saameyn wanaagsan ku yeelan doontaa muuqaalka goobta, kaasoo danaynaya caafimaadka martidooda iyo deegaanka, sababtoo ah qalabkan mahad leh qaddarka qashinka soo baxay si weyn ayaa loo dhimay.
Biyaha loo diyaariyey qaabkan waxay u noqon karaan daaweyn weyn xagaaga dhammaan kuwa harraadsan, oo markaa si aad ah u sii go'aansan doona adeegsiga maqaayadaha.
mashiinka iibinta biyahahoteel biyo la’aan ahbiyo bilaash ah makhaayaddahuteel kululhoteel biyo la’aan ahBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee hoteelkaBixiyeyaasha biyaha ee maqaayadahaBixiyeyaasha kaarboon-gaaska lehBixiyeyaasha biyaha hc66lbiyaha kirada bixiyaha ahtuubada biyaha tuuraBixiyeyaasha biyahabiyo xireenkaqaboojiyaha biyo-diiyahamashiinka biyo-gelintaaaladda loogu talagalay biyo macaanaaladda biyaha karbohaydraydBiyaha makhaayada ku yaalbiyo loogu talagalay calool-xanuunkabiyo makhaayaddabiyaha tuubbada ka soo baxabiyaha macdanta ee hudheelkabiyaha baarkabiyaha calooshabiyaha hoteelkabiyaha kafeekabiyaha maqaayaddatubada biyaha hoteelkatuubada biyaha makhaayadda dhexdeedabiyaha gugahudheel biyo qabow